Izindaba ze-ECommerce iyiwebhusayithi egxile ekuletheni izindaba zakamuva kanye nemihlahlandlela evela emhlabeni wezentengiselwano ye-elektroniki kumatilosi ayo. Isungulwe ngo-2013, ngesikhathi esifushane isivele isizinzile njenge inkomba emkhakheni wakho, ikakhulu ngenxa yethimba labahleli, ongabheka lapha.
Uma ufuna ukubona ifayela le- uhlu lwezindikimba ukuthi sisebenzelane nabo esizeni, ungavakashela i- isigaba sesigaba.
Uma ufuna sebenza nathi, qedela leli fomu futhi sizoxhumana nawe ngokushesha okukhulu.
Ngiyakuthanda ukumaketha namasu wokuthuthukisa izitolo eziku-inthanethi noma i-eCommerce. Ngakho-ke, ngabelana ngolwazi lwami nezihloko ezingathakazelisa abafundi, kungaba ngoba banesitolo esiku-inthanethi noma uphawu lomkhiqizo.
IDiploma ye-Business Sciences, egatsheni le-Marketing, Advertising and Marketing, ligxile emhlabeni wezindaba, kuzo zonke izindawo kusuka kubuchwepheshe obusha kuya ekuthakazeleni, uchwepheshe kwezezimali, i-Forex, izimali, iMakethe yamasheya, ukutshalwa kwezimali kanye nezindaba ezikhwameni, kepha ikakhulukazi umthandi wezimakethe zikazwelonke nezamazwe omhlaba, umxube obalulekile wokuthola nokuletha izindaba nezeluleko ezinhle kakhulu kubafundi bezezimali.
Intshisekelo yomkhakha we-inthanethi, ngoba ikhona kukho konke ukuthengiselana kwezezimali esikwenzayo. Ngakho-ke, akukho okungcono kunokugcina unakile ezindabeni zakamuva kwezentengiselwano ngogesi.